Doppelgerts - सबै अवसरका लागि भिटामिन
Doppelgerts - एक संयुक्त, restorative लागूपदार्थ बोट मूल को। यी औषधिहरू भिटामिन को एक समूह पर्छन्। तिनीहरूले आवश्यक खनिज र भिटामिन संग मानव शरीर प्रदान गर्नुहोस्। तयारी श्रृंखला धेरै व्यापक छ र 16 प्रजाति समावेश छ। मधुमेह, हृदयघात, वृद्धि, घबराहट संग मान्छे को लागि, तपाईं इच्छित सेट Doppelgerts उत्पादन चयन गर्न सक्नुहुन्छ। भिटामिन उत्पादनहरु को यो श्रृंखला - सबै अङ्गहरू र प्रणाली को उचित कामकाज सुनिश्चित गर्न आफ्नो शरीर समर्थन उच्च गुणवत्ता उत्पादन।
हामीलाई अझ विस्तृत धन Doppelgerts एक श्रृंखला विचार गरौं:
Energotonik - एक टनिक लागूपदार्थ, टन र दक्षता बढ्छ। यसलाई उच्च भौतिक exertion, थकान, फ्रेंच मा प्रयोगको लागि सिफारिस गरिएको।
Vitalotonik Doppelgerts - भिटामिन सेट टनिक प्रभाव छ जो। दबाइ adoptogennym र शान्तसगं छ। यो थकान, asthenia, neurasthenia लागि सिफारिस गरिएको छ।
Nevrotonik - यो भयातुर सिस्टम को स्थिर कामकाज लागि तैयारी, निद्रामा normalizes र आफ्नो शरीर मा एक antidepressant प्रभाव छ।
Kardiovital - हृदयघात संग मान्छे को लागि एक विकल्प। दबाइ हृदय रोग लागि धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
Melissa - एक उच्चारण शान्त प्रभाव छ।
Ginseng - बलियो र आफ्नो शरीर टन।
भिटामिन ई गुण - Replenish गर्न भिटामिन ई gonads stabilizes डिजाइन गरिएको छ।
Lutein - cataracts र degenerative रेटिना Thinning विकास रोक्छ।
मधुमेह लागि Doppelgerts भिटामिन
सन्तुलित आहार संग, हामी आवश्यक भिटामिन को आवश्यक रकम प्राप्त, तत्व र खनिज पहिल्याउन। सन्तुलित आहार को अभाव मा, हाम्रो शरीर आवश्यक पोषक आफ्नो आपूर्ति replenished छैन। किनभने विशेष आवश्यक आहार को मधुमेह, संग मान्छे, केही भिटामिन र खनिज को एक अभाव। को चयापचय यदि यसबाहेक, पोषक लागि आवश्यकता बढ्छ। Malfunctioning चयापचय, वृद्धि वा अत्यावश्यक पोषक को सेवन कम हुन सक्छ। मधुमेह लागि भिटामिन - त्यस्तो मान्छे Doppelgerts लागूपदार्थ विकसित गरिएको छ लागि हो।
आधा ट्याब्लेटको आफ्नो शरीर पुरै दिन लागि अत्यावश्यक घटक को आपूर्ति दिन्छ। सेलेनियम, म्याग्नेसियम, जस्ता र क्रोमियम: तिनीहरूले सही खनिज संग सही अनुपात मा भिटामिन चयन आफ्नो शरीर मा प्रवेश सुविधा। यसलाई उदाहरणका लागि, उचित चयापचय मद्दत गर्छ, जब शरीर देखि एक ठूलो म्याग्नेसियम excretion। सँगै म्याग्नेसियम संग बी भिटामिन बिजुली आपूर्ति कक्षहरू ऊर्जा मा खाना को घटक रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न। यो Doppelgerts दबाइ को सिद्धान्त हो। बी भिटामिन पनि छाला र केन्द्रीय स्नायु प्रणालीको लागि आवश्यक हो, अर्थात्, भिटामिन बी 1, B6 र फोलिक एसिड हृदय प्रणाली को स्वास्थ्य कायम राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। रक्त शर्करा को इच्छित सन्तुलन कायम गर्न सूक्ष्म तत्व क्रोमियम, जस्ता र म्याग्नेसियम आवश्यक छन्। क्रोमियम र जस्ता विकास मा मद्दत गर्छ र हर्मोन इन्सुलिन को संग्रह, सेलेनियम कक्षहरू मद्दत गर्छ। पाठ्यक्रम खनिज, ट्रेस तत्व को एक अतिरिक्त स्रोत र, भिटामिन रूपमा रोकथाम लागि सिफारिस गरिएको छ।
- यो पनि लाइन "सक्रिय" कम्पनी Doppelgerts टिप्पण लायक छ कपाल र नङ, लागि भिटामिन जस्ता को एक सहायक स्रोत, बायोटिन। हर्बल सामाग्री र खनिज सेट, तपाईंको छाला nourishes, वृद्धि सुधार र कपाल र नङ पुनर्स्थापना गर्न मद्दत गर्छ। को लागूऔषधको सबै तत्व ध्यान प्रयोगशालाहरुमा Doppelgerts मा बारम्बार परीक्षण मार्फत चयन गरिएका छन्। बाल भिटामिन प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव जोगाउन। एक दानाको गेहूं तेल, कोदो निकाल्ने, समावेश भिटामिन B5, भिटामिन B6, जस्ता सल्फेट, बायोटिन।
खाद्य additives को धेरै सूची को, त्यहाँ सम्पूर्ण आम Doppelgerts देखि कम्पनी differentiates एक तथ्य छ - भिटामिन मात्र निवारक उपकरण रूपमा कार्य छैन, तर पनि रोग को एक धेरै नम्बर व्यवहार हो।
आफैलाई हेरचाह र स्वस्थ रहन!
हामीलाई भन्नुहोस् कसरी creatine लिन
चिकित्सकहरु र उपभोक्ताहरु को समीक्षा: को "Herbalife" कम्पनी उत्पादन
समीक्षा: "माछा तेल" बाट "Biokontur" दाना। माछा तेल "Biokontur" छोराछोरीलाई
"Geladrink गुण": डाक्टर को समीक्षा, प्रयोगको लागि निर्देशन, contraindications
किन स्तन दूध बच्चालाई र आमा को लागि यति महत्त्वपूर्ण छ
केही सुझावहरु: pokleit गैर-बुना वालपेपर रूपमा
किन सार्ने बारेमा सपना? सपना पुस्तक भन्नेछु!
वैक्यूम ट्यूब हेडफोन प्रवर्धक - हरेक संगीत प्रेमी को सपना
फेंग फू बिन्दु। विधि कायाकल्प (मूल्यांकन)
लाइन प्रबन्धकहरू - यो छ ... रैखिक र कार्यात्मक नेताहरूले
कसरी Batumi देखि टिबिलिसी सम्म प्राप्त गर्न? टेलिभिजनबाट बाइटुमीबाट रेलबाट कसरी प्राप्त हुन्छ?
पास्ता डिनर इटालियन लागि नुस्खा
Pies कुम्मैत लागि भर्नु। कुम्मैत संग केक तला
उपभोक्ता समाज - यो inhumanity बाटो
"Enterosept": प्रयोगको लागि निर्देशन, सङ्केत गर्छ। वयस्क मा पखाला लागि उपचार
संसारको सबैभन्दा असामान्य घरहरू